Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây hoa sứ trong chậu | Hatgiongtihon.net - trung tâm cung cấp hạt giống tí hơn
Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây hoa sứ trong chậu | Hatgiongtihon.net
Đang Đọc: Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây hoa sứ trong chậu | Hatgiongtihon.net in Hatgiongtihon.net
Iintyatyambo zeporcelain zaseThailand >>
Iintyatyambo ezingaqhelekanga – iintyatyambo ezintle >>
Ukunyuka kweentyatyambo – iintyatyambo eziwisayo >>
Izityalo ze-porcelain ezikhuliswe kwimbewu zinokutyatyamba emva kweenyanga ezi-8 ukuya kunyaka omnye. Iintyatyambo ze-porcelain zivame ukubunjwa njenge-funnel encinci, isasaza iipetali ezinkulu ezi-5 njengenyibiba ngaphandle. Nangona kunjalo, xa i-mutant inokuqhakaza ukuya kwi-6-7 engaqhelekanga kakhulu kwaye ihle kakhulu … I-Inflorescences esuka kwi-3-10, ngokuqhelekileyo igxininiswe phezulu. Kwiqela leentyatyambo, iintyatyambo ezinkulu zidubula ngaphambi kokuba iintyatyambo ezincinci zidubule kamva, intyatyambo nganye idubula malunga neentsuku ezi-8-10 ngaphambi kokuba ibune, ngoko ke kuthatha ixesha elide ukudumba zonke ii-inflorescences. Imithi yeporcelain inamasebe amaninzi kunye neentyatyambo ezininzi, ngoko ke iintyatyambo zidubula phantse unyaka wonke. Isityalo esinye sinokumiliselwa kwiindidi ezininzi ezinemibala yeentyatyambo eyahlukileyo.
Izityalo ze-porcelain zikhula ngokukhawuleza, zikhawuleza zisasaza, iintyatyambo ezintle, kumthi omnye unokudibanisa iintlobo ezininzi ze-porcelain ezinemibala eyahlukeneyo. Ukongeza kubuhle bentyatyambo, isityalo se-porcelain sinokugotywa ukwenza isityalo sokuhombisa, ngenxa yeengcambu zayo ezintle kakhulu. Ngoko ke, izityalo ze-porcelain zithandwa ngabantu abaninzi, ukutyala i-porcelain kuya kuzisa ukusebenza kakuhle kwezoqoqosho.
2. Khetha umhlaba wokutyala:
Izityalo ze-porcelain azikhethi malunga nomhlaba. Imihlaba enjengomhlaba oyisanti, inyama, kunye nenyama ekhaphukhaphu inokukhuliswa kwimeko yokuba umhlaba uvuthulukile kwaye ugalelwe amanzi. Umhlaba we-porcelain ungaxutywa ngolu hlobo lulandelayo: 40 – 50% umhlaba we-alluvial, isanti exutyiweyo okanye inyama elula, 50 – 60% yezinto eziphilayo ezifana necoir ebolileyo, amaqokobhe amandongomane abolileyo, amakhoba erayisi. Ukuba umhlaba une asidi, kungagalelwa izichumiso ze lime kunye ne phosphate. Zonke zixutywe kakuhle kwaye zinyangwe ngamayeza athile okubulala umngundo ukuze kubulawe iintsholongwane, zifukanywe kwiimfumba ukuze zisetyenziswe ngokuthe ngcembe.
3. Ukutyalwa njani:
Kukho iindlela ezimbini zokukhulisa i-porcelain: ukuhlwayela imbewu kunye nokusikwa. Kodwa okwangoku, uninzi lwabadlali be-porcelain basebenzisa indlela yokusika. I-potted porcelain ithandwa kakhulu kuba intle kwaye kulula ukuyinyamekela, ngoko ke bambalwa abantu abayilimayo ngqo egadini.
Iimbiza ze-porcelain kufuneka zibe nemingxuma emazantsi ukuze zikhuphe amanzi, unokubeka ilitye elincinci, izitena ezincinci phantsi kwembiza, ugweme ukwenza umhlaba wokubumba uvale umngxuma, okanye iingcambu ze-porcelain ziphuma kumngxuma wokukhupha amanzi, ekuhambeni kwexesha. iyakukhula iwuvale umngxuma wokukhupha amanzi. Sebenzisa iCompomix Dau Trau umhlaba weentyatyambo zokuhombisa ukuzalisa ukuya kuthi ga kwi-2/3 yembiza, uze ubeke isityalo seporcelain, silungise embindini wembiza, iingcambu zisasazeke ngokulinganayo. Qhubeka ukongeza umhlaba ukuze umhlaba ugutyungelwe kuphela ngeengcambu kwaye umalunga nenqanaba elifanayo nomphezulu wembiza. Ukuba kukho isethi yeengcambu ezinkulu, kufuneka zilale phezu kwebhodwe, umhlaba kufuneka ube ngaphantsi komlomo webhodwe, ukwenzela ukuba xa unkcenkceshela, ungaphumi.
Izityalo ze-porcelain zityalwe ixesha elide, iingcambu zandiswe, kufuneka zifudukele ebhodweni elitsha elitsha, kwaye kwangaxeshanye ziphakamise iingcambu ukuze ziphakame emlonyeni webhodwe, ukumila komthi omtsha kuhle.
Kwimbiza entsha, isityalo kufuneka sibekwe ngokucocekileyo, siphakamise iingcambu kwaye sigobe ngexesha elifanayo ukulungisa umthi ngokweminqweno yomdlali we-porcelain, ubeke umhlaba kumgama ofanayo nomlomo wembiza, amanzi aneleyo. .
4. Uzilungisa njani iingcambu kunye nokumila:
Izityalo ezikhule iminyaka eyi-1-2 zineengcambu ezinkulu, abalimi kufuneka bagobe kwaye bazilungise ukuze zibe zintle. Iingcambu ze-porcelain zilula kakhulu ukulungiswa, ngakumbi izityalo ze-porcelain ezikhuliswe kwimbewu zihle ngakumbi kuba akukho sinqeni phakathi kwesiqu kunye neengcambu ezifana ne-porcelain cuttings okanye ukusika. Izityalo ze-porcelain ezikhule ukusuka kwimbewu zineziqu kunye neebhalbhu ezinamathela kunye njengomntu omileyo, oleleyo, okanye oguqayo. Rhoqo ngonyaka kwixesha elomileyo, ngemvula encinci, kunokwenzeka ukuphakamisa yonke inkqubo yeengcambu ngaphandle kwembiza ukuthena indawo entle ngakumbi. Cwangcisa iingcambu ukuze zisasazeke ngokufanelekileyo, zinqumle ii-rootlets ezingafunekiyo, ukusika nganye kufuneka kufakwe ikalika. Ngokuxhomekeke kwimilo yeengcambu inokuhlelwa ngokweminqweno yomdlali we-porcelain. Xa ugoba kwaye ulungisa iingcambu, amanzi akufanele aniselwe, xa i-cut cut form callus, kufuneka ifakwe amanzi. Kwakhona kunokwenzeka ukuba uncothule zonke izityalo ze-porcelain, ukugubha umhlaba, ushiye kwindawo enomthunzi ukuze unciphise iingcambu, uze ugobe kwaye unqumle ngendlela yezilwanyana, imifanekiso yabantu … Ukuze i-porcelain iphilise. , amanxeba amatsha aya kuphinda atyalwe kwakhona, anakekele indawo enomthunzi de umthi uthathe iingcambu, uvelise amasebe amatsha kwaye uzise elangeni kwaye unkcenkceshele ngokuqhelekileyo kwakhona.
Ukuze intyatyambo ye-porcelain ibe nesimo esihle, kufuneka igobe ngononophelo. Umthi weporcelain omde kwaye omde onamasebe amaninzi agoba kwiileya ezininzi njengezityalo zokuhombisa zakudala, izityalo zokuhombisa. Kuyimfuneko ukuthena amagatsha amancinci agqithisileyo, ugcine amagatsha kwindawo echanekileyo, uze ugobe njengoko ufuna.
Izichumisi zendalo zifanelekile kwiporcelain efana nenyathi, inkomo, ihagu ebolileyo, ikeyiki yeoli, esetyenziswa njengesichumisi xa kutyalwa okanye xa kufakwa imbiza, ukulungisa iingcambu. Izichumisi ze-inorganic ezifana ne-nitrogen, i-phosphorus, i-potassium, i-NPK, izichumisi ze-foliar zisetyenziselwa ukuchumisa ngexesha lonyaka. Ngokuxhomekeke kwiminyaka yomthi, kunokwenzeka ukuchumisa i-porcelain ngezichumisi ezilandelayo kunye needosi:
+ Izityalo ze-porcelain emva kokunyuka kwetrone (esanda kutyalwa kwi-cuttings) – phantsi kweenyanga ezi-6 ubudala: Dilute 10-15g ye-NPK 20-20-15 + TE okanye i-NPK 16-12-8 + TE kwi-10-15 iilitha zamanzi okunkcenkceshela ngokwaneleyo ukufuma, malunga neentsuku ezili-15-20 ngaphandle / ixesha. Ukusetyenziswa okudityanisiweyo kwesichumiso samagqabi i-Dau Trau 005 sitshizwa ngamaxesha athile rhoqo emva kweentsuku ezisi-7-10 ukuvuselela amahlumelo, amagqabi kunye neengcambu.
+ Izityalo ze-porcelain ezivela kwiinyanga ezi-6 – unyaka we-1: sebenzisa rhoqo i-20-30 gr ye-NPK 20-20-15 + TE okanye i-NPK 16-12-8 + TE / imbiza, iintsuku ezingama-20-30 ngaphandle / ixesha. Ukusetyenziswa okudityanisiweyo kwesichumiso samagqabi i-Dau Trau 005 sitshizwa ngamaxesha athile rhoqo emva kweentsuku ezisi-7-10, sivuselela amahlumela, amagqabi kunye neengcambu. Ungasebenzisa iBuffalo Head 007 ukutshiza xa ufuna ukwenza iintyatyambo zeporcelain.
+ Izityalo ze-porcelain ezingaphezu konyaka owodwa ubudala, kunye neentyantyambo ezizinzile: Sebenzisa rhoqo i-20-30 gr ye-NPK 20-20-15 + TE okanye i-NPK 16-12-8 + TE / imbiza, iintsuku ezingama-20-30 ngaphandle / ixesha. Ukusetyenziswa okudityanisiweyo kwesichumiso samagqabi i-Dau Trau 005, sitshizwa ngamaxesha athile rhoqo emva kweentsuku ezisi-7-10, sivuselela amahlumela, amagqabi kunye neengcambu. IBuffalo Head 007 ivuselela ukudumba kwaye iBuffalo Head 009 inesiphumo sokhathalelo lwentyatyambo oluhlala ixesha elide.
I-porcelain isityalo esimelana nelanga, esifanelekileyo kakhulu kwimozulu yasezantsi, kodwa iphinda yoyike kakhulu i-waterlogging, ngoko ke kuphela xa ilanga lomile, umhlaba uya kunkcenkceshelwa. Izityalo ze-porcelain ezisandula ukutyalwa, zifakwe embizeni okanye zisikwe ukusika akufanele zinkcenkceshelwe kakhulu. Ukunkcenkceshela i-porcelain kufuneka kusetyenziswe imilomo emihle, izitshizi okanye iinkqubo zempompo zokutshiza.
7. Ulawulo lweentyatyambo:
Ukuba ufuna umthi weporcelain ube neentyatyambo ezininzi, musa ukuvumela isebe le-porcelain libe lide kakhulu, isebe kufuneka lisikwe emva kokuba intyatyambo nganye ibunile, isikwe amaxesha amaninzi, ixesha ngalinye usike nje ubude obufutshane, amacandelo amaninzi amafutshane anika. ukuzalwa kumasebe amaninzi, amasebe amaninzi aya kuba neentyatyambo ezininzi. Ukuba ufuna i-porcelain idubule ngeholide yeTet, kufuneka uyisekele: Ukuba imvula ide iphele unyaka wonke kwaye imozulu ipholile, nquma amasebe e-porcelain kwinyanga epheleleyo yenyanga yesi-7. Ukuba enyakeni kukho ilanga elininzi, imvula encinci, kunye nesomiso ixesha elide, sike amasebe e-porcelain kamva ekuqaleni kuka-Agasti.. Idityaniswe nokutshizwa kwamaxesha athile kwezichumiso zefoliar kunye nomxholo ophezulu we-phosphorus kunye ne-potassium njengeDau Trau 007, Dau Trau 009 , IBuffalo Head 701, Buffalo Head 901. Xa ubona amagqabi eporcelain ejika ukusuka eluhlaza abe tyheli aze awe, kwiincam zamathupha ayeke ukuvelisa amagqabi amatsha anamaqhakuva, elixesha apho umthi wenza amathupha.
8. Ulawulo lwezinambuzane:
Izityalo zeporcelain ezilungileyo eziluhlaza zihlala zinezinambuzane ezininzi eziphambili kunye nezifo ezifana nezi:
– Imibungu eluhlaza: Ukuba ubona amachokoza amnyama kwiincam zamagqabi, oko kubangelwa yimibungu eluma kwaye itye amagqabi amagqabi amancinci. Ngokukodwa iimbungu eziluhlaza, ezimhlophe xa zincinci, zikhula ziluhlaza, le ngqungquthela idla ngokukhawuleza, kwiintsuku ezingama-2-3, onke amaqabunga amaqabunga aphelile, kwaye angadla nangaphezulu komthi. Sebenzisa enye yeziyobisi iTrebon, iMipcin, iVibasu, iBassa.
– Icottonhoppers kunye ne porcelain beetles: Icotton planthopper incinci kwaye ithe tyaba, inefluff eninzi ejikelezileyo, i-porcelain beetle inkulu ngokuphindwe kabini ubukhulu ngokuphindwe kathathu, umzimba u-oval, ikwaphethe i-fluff eninzi kunye nomsila. iinwele zinde kakhulu, zihlala ziluma incindi efunxayo kwiincam zamagqabi kwaye zikhuphe intlaka eswiti ukuze zitye iimbovane, kwaye ziwise itshokhwe eninzi emhlophe phezu kwemithi; Ixesha elide, yonke i-porcelain top iyabola. Iintwala kunye nezinye izinambuzane kwincochoyi yemithi zonakalisa imiphezulu yemithi, kwiziqhamo eziwonakalisayo, ezincinci ziyawa, kwaye iziqhamo ezikhulu zibhuqa imbewu ukuze ingakhuli emva kokuhlwayela. Xa ifunyaniswa ukuba itshizwe ukunqanda ukubeka amaqanda. Ukuba iihoppers zibhaqiwe, sebenzisa ibrashi encinci ukutshayela zombini iihoppers kunye ne powdery mildew.
Sebenzisa iziyobisi Vicidi-M 50 ND, Visher 25 ND, Vidithoate 40 ND…
– Intwala, izigcawu ezibomvu: Izigcawu ezibomvu zinomzimba obomvu, nazo zineenwele ezininzi, kunzima ukuzibona ngeliso lenyama, zifunxa incindi emagqabini emagqabini, zenza amagqabi amatsha ajike abe bomvu-mdaka emva koko awe, amathupha ayabhaqa. . Chitha kanye ngenyanga ukuze uthintele. Amayeza okubulala izitshabalalisi anokuba: Trebon, Bi 58, Kelthane, Viphensa 50ND, DC Ttron Plus….
– I-Powdery mildew: Isifo se-soft rot sesona sixhaphakileyo kwi-porcelain yaseThai, kunzima kakhulu ukunyanga. Ekuqaleni isenokuba ichaphaza elimnyama kwaye emva koko isasazeke ngokukhawuleza, ukuba ayibonwa kwangethuba, isityalo siya kuba nokubola okuthambileyo. Ingakumbi ngexesha lemvula, kunokwenzeka ukubulala umthi wonke emva kweentsuku ezimbalwa kuphela.
Unobangela: Isenokubangelwa yintsholongwane, xa ukufuma kuphezulu kakhulu okanye ngamanxeba ezinambuzane.
Uthintelo kunye nonyango: Sika konke ukubola okuthambileyo, ukuya ekupheleni apho umbindi womthi unamachokoza amnyama, kungenjalo uya kuqhubeka usasaza umthi wonke, sebenzisa ikalika kwisikiweyo ukuze ubulale iintsholongwane. Sebenzisa iBatocide 12WP, Viben-C, Newkasuran 16.6 BTN…
– Isifo samachaphaza atyheli emagqabini: Amagqabi eporcelain, emva kokuba evelwe yimvula okanye umoya onamandla, akholisa ukuvelisa amachaphaza amancinci amaninzi kumagqabi atyheli okanye amdaka ngokutshisa, aze asasazeke ngokukhawuleza kwigqabi lonke, kamva abune okanye awe. Ngamanye amaxesha ukutya esiqwini kwenza umthi uthambe kwaye ubole ukusuka emasebeni ukuya kutsho esiqwini, xa unwenwela emazantsi, umthi uyafa. Inokubangelwa ngumngundo kwaye isasazeka ngokukhawuleza kwisityalo sonke.
Uthintelo kunye nonyango: Esi sifo sikholisa ukuvela ngexesha lemvula, ngoko xa ubona amagqabi ajike abe tyheli, kufuneka anqunyulwe ngokukhawuleza kwaye atshizwe ngemichiza yokungunda efana neTopsin, Appenearb, Dithane, zineb, copper oxychloride… Izityalo ze-porcelain zinzima kakhulu ukunyanga Ukubeka iliso rhoqo ukuze kuthintelwe ngexesha elifanelekileyo.
Trồng và chăm sóc cây hoa thạch thảo nở hoa quanh năm | Hatgiongtihon.net
Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây hoa nhài (cây lài) đơn giản cho hoa nở đều, đẹp | Hatgiongtihon.net